एचआइभी – Himalaya Television
भेदभावको डरले खुल्नै मान्दैनन् एचआइभी संक्रमित (भिडियो रिपोर्टसहित)
१९ फागुन २०७७ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितमाथिको भेदभावका कारण एचआइभी संक्रमण नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ । भेदभावको डरले संक्रमित खुल्न नचाहने भएकाले न्युनिकरणमा पनि असर परेको हो । मुलुकभर एचआइभी नियन्त्रणमा आउँदै गए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने चुनौती...
कहाँबाट कहिले आयो एचआइभी ? अहिलेको अवस्था के छ ? (भिडियोसहित)
१६ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । एचआईभी/एड्स कुनै समय ठूलो महामारी मानिएको थियो । अहिलेसम्म यसबाट करोडौं संक्रमित भइसकेका छन् भने लाखौंको मृत्यु भएको छ । यो भाइरस कहाँबाट र कसरी सुरु भयो ? एचआईभीको पूरा रुप ह्युमन इम्युनोडिफिसेन्सी भाइरस...
यस्तो छ नेपालमा एचआइभी संक्रमणको अवस्था (भिडियोसहित)
१५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । ३३ औं विश्व एड्स दिवस भोलि एचआइभी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । यो दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा एचआइभी संक्रमणको अवस्था कस्तो छ त ? एचआईभी–एड्स...